Honor 8, nosedrainay tao amin'ny IFA any Berlin | Androidsis
Ry haja, ny fahombiazan'i Huawei ho an'ny tsena an-tserasera dia mahomby hatrany. Efa nanana fotoana nosedraina modely samihafa izahay, toy ny Honor 7 mahery. Ankehitriny dia anjaran'ny mpandimby azy sy ny sainam-bolan'ny orinasa vaovao. Noho izany dia nanakaiky ny fijoroan'ny Huawei izahay tao amin'ny IFA any Berlin asehoy anao amin'ny horonan-tsary ny tsiambaratelon'ny Honor 8, terminal iray tena matanjaka, miaraka am-pamaranana lehibe ary manaraka izany aorian'ireo olona teo alohany nahatratra ny tsena tamin'ny vidin'ny hatsikana: 399 euro.
1 Honor 8, ny mpanjaka ao amin'ny faritra afovoany ambony amin'ny sehatra
2 Toetra mampiavaka ny Huawei Honor 8
Honor 8, ny mpanjaka ao amin'ny faritra afovoany ambony amin'ny sehatra
Ny zavatra voalohany miavaka rehefa mandray ny Honor 8 voalohany dia ny kalitaon'ny famaranana. Tena tsara ny terminal, manome fijery premium be. Mirefy 145.5 x 71 x 7.5 mm ary milanja 153 grama, azoko antoka fa tena milanjalanja tsara ilay workhorse Honor, tsy manelingelina ny tanana ary mamela azy hitazona mora foana.
Mariho fa, na eo aza ny vatany vita amin'ny vy, mitazona tsara eny an-tànany ny telefaona, tsy toy ny finday hafa izay manana karazan'io karazana io. Ny efijery vita amin'ny haitao 2.5 D dia manararaotra tsara ny rindrina eo aloha, mamela ireo fepetra ireo horefesina. Tonga teny an-tsena tamin'ny loko efatra ny Honor 8: Gray, Gold, Electric Blue ary Black.
Toetra mampiavaka ny Huawei Honor 8
lafiny X X 145.5 71 7.5 MG
lanja 153 grama
efijery LTPS 5.2-santimetatra misy vahaolana 1920 x 1080 pixel sy 423 dpi
processeur Valo-fototra HiSilicon Kirin 950 (efatra 72 GHz Cortex A2.3 atiny efatra ary enina 53 Ghz Cortex A1.8 hafa)
Fakan-tsary aoriana 12 megapixel sensor roa miaraka amin'ny autofocus / detection face / panorama / HDR / LED flash / Geolocation / 1080P (full hd) fandraisam-peo amin'ny 120fps
Fitaovana hafa sensor sensor / body vita amin'ny aliminioma / rafitra famenoana haingana
bateria 3.00 mAh tsy azo esorina
vidiny 399 euro amin'ny Amazon
Ara-teknika dia miresaka telefaona iray isika Manana ny processeur, GPU ary RAM mitovy amin'ny Huawei P9 izy Ka afaka manome toky isika fa hiasa toy ny tifitra izany. Ny efijery 5.2-inch dia manome kalitaon'ny sary tena tsara, misy loko mazava sy maranitra, ary koa mihoatra ny zoro fijerena marina.
Araka ny hitanao tamin'ny fandinihanay video, ny Fakan-tsary 12 megapixel dual aoriana hanolotra fisamborana tena tsara izany. Ary ireo mpitia sary dia hankafy toy ny ankizy milalao ny bokeh effet izay ahafahana mamorona ity fakantsary roa ity amin'ny Honor 8. Tsy azonay adino ny fakantsary eo anoloana 8 megapixel izay maka sary tena tsara ihany koa, mpankafy selfie na fakan-tsary mahafinaritra.
Raha fintinina, telefaona tena feno ary izay, raha raisintsika ny kaonty tsy mampinoe aorian'ny serivisy fivarotana natolotry HonorIzy io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra hodinihina raha te hanana finday avo lenta ianao nefa tsy mila mamela karama anao mandritra ny fanandramana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Honor 8, nosedrainay izany tao amin'ny IFA any Berlin